Iindaba-Phantse i-100 yeeMveliso eziHlanganisiweyo eziHlanganisiweyo zoMdibaniso, ukuPhakama kweMathiriyeli ekrwada kwakhona?
Tsalela Us: 0086-18731103336
Phantse i-100 yeeMveliso eziHlanganisiweyo eziHlanganisiweyo zeMichiza, ngaba ukuPhakama kweMathiriyeli ekrwada kwakhona?
Ukusukela ekuqaleni konyaka, itayara, imichiza, intsimbi, isichumisi semichiza njalo njalo ekunyuseni amaxabiso ngokuhlangeneyo, ishishini liye lachaphazeleka kakhulu, ingeniso yemveliso icinezelwe kakhulu …… Ixabiso lezinto ezingafunekiyo liye lanyuka.
Phantse i-100 yamashishini amachiza ayekile ukuvelisa, esongeza isithuko ekonzakaleni!
Umjikelo wokugqibela wokunyuka kwamaxabiso wenze ukuba amashishini amaninzi ahlupheke, phakathi kwabo, ukuthengiswa kweemakethi zamachiza kunye neemfuno azinakulinganiswa. Ngoku kutshanje, iindaba zokuba phantse i-100 lamashishini aphambili kushishino lweekhemikhali ngokudibeneyo ayeke imveliso kubangele ifuthe elinamandla imakethi yemakethi, enokuthi ilandelwe kukujikeleza okusha kwamaxabiso.
Isibhengezo seenkampani zeekhemikhali ezimalunga ne-100 ezibandakanyeka kwi-PE, i-bisphenol A, i-PC, i-PP kunye nezinye iikhemikhali Kuyaqondakala ukuba ukuveliswa kwamashishini, yinxalenye yeshishini yinxalenye yolondolozo lwesixhobo, kukwakho nenxalenye yokuma okupheleleyo Ukugcinwa, ixesha lokugcinwa liziintsuku ezili-10-50. Ngelo xesha, amanye amashishini athi ngokuthe ngqo "uluhlu lweentsalela alukho lukhulu, okanye luya kwaphulwa"!
Ulondolozo olukhulu lokupakisha kwimizi-mveliso, imveliso yehlile, ukuhanjiswa kwezinto ezilukhuni kunzima ngakumbi, uvalo sele luqalile ukubila …… Ukongeza, ezinye iingxilimbela zeshishini sele zilinyusile ixabiso, kungoko kubonakala ngathi ukuqala komjikelo omtsha wamaxabiso kunyukile ukuqiniseka.
Njengoko ibango liqhubeka nokukhula, ukunyuka kwamaxabiso okutsha kunokuba sendleleni
Ngapha koko, umjikelo omtsha wokunyuka kwamaxabiso ayisiyonto yendalo, kodwa ngumkhwa weThe Times. Kufuneka kuthiwe ulindelo lwamaxabiso lubonakaliswa ngokupheleleyo kukunyuka kwamaxabiso ezinto ezininzi, kwaye ikwabizwa ngokuba yi "the eyona mveliso ikhawulezayo inyuka ukusukela kwinkulungwane yama-21 ”.
Ekuqaleni, ukunyuka kwamaxabiso ezinto ezingasetyenziswanga khange kubangele panic.Iifektri ezininzi zigcinele izinto zokwenza izinto ngaphambi kokuba uMnyhadala weNtwasahlobo uhlale okwexeshana, uninzi lweefektri zisalinde ukuthengisa xa amaxabiso ehlisiwe. Ixesha, amashishini amaninzi anyuka kakhulu, kuye kwafuneka ehlise amaxabiso.
Nangona kunjalo, okwangoku, ukubanakho komjikelo omtsha wokunyuka kwamaxabiso ezinto ezisetyenzisiweyo zekhemikhali kusenkulu kakhulu, kwaye isizathu asinakwahluka ekukhuleni kwemfuno noqoqosho.
Okokuqala, uqoqosho lwehlabathi lubuyela kwimeko yesiqhelo ngokukhawuleza kwaye ibango leekhemikhali kunye nezinye izinto ziyakhula Okwesibini, ukugqithiswa kwe- $ 1.9 trillion ye-US yokunyusa iphakheji kunye nokunyuka kwamaxabiso aphezulu kunokuba bekulindelwe kuya kunyusa ibango kwicandelo lezemali.
Ukungena ngoMatshi, uninzi lwamashishini sele luqalile ukusebenza ngokulandelelana, ibango lemveliso liya konyusa, ukubonelela kuya kuba yingxaki enkulu, umjikelo omtsha wokunyuka kwamaxabiso awukude…
Ukunyuka kwamaxabiso okuzayo kuya kuba nefuthe elikhulu kwintengiso nakumashishini kwakhona, ezinye iinkampani ezincinci ezinenzuzo ephantsi zinokurhoxiswa kwinqanaba lezorhwebo, kwaye abo basindayo baya kuba namandla!
Ixesha lokuposa: Mar-29-2021
Yongeza: indawo yomzi mveliso tangqiaotang zhang jiagang isixeko china